အစေ့ အဆန်စားပါ - SANTHITSA
အစေ့အဆန်တွေ စားခြင်းဟာ သင့်ကို ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင် မလည်း ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား ။ သင်နဲ့ အခြားသော လူ အများစုဟာ အဆာပြေ မုန့်ပဲ သရေစာ စားတဲ့ အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ် တဲ့ အချိုစာ တွေ အဆီ အအိမ့် တွေကိုသာ မက်မက် မောမော စားလေ့ရှိကြပါတယ် ။
အမှန်မှာ မုန့်ပဲ သရေစာ အဖြစ် အစေ့ အဆန်များကိုသာ စားကြမယ် ဆိုရင် အစာလည်း ပြေ ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူး တွေကိုလည်း ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အိုမီဂါ ၃ အဆီကို ရရှိဖို့…. သင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ အဆီ အိုမီဂါ ၃ ကို အစေ့အဆန် တွေကနေ
ရရှိ နိုင်တယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး ပြောချင် ပါတယ် ။
အိုမီဂါ ၃ အဆီဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းမှုကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပါတယ် ။ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှု တွေကြောင့် အခြားသော ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောဂါ များကို ဖြစ်ပွား စေတာမို့ အစေ့အဆန်ကို စားသုံးပြီး ရောင်ရမ်းမှု ကို လျှော့နည်းအောင် ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ် ။
နေ့စဉ် သရေစာအဖြစ် စားသုံး ပေးပါက သွေးတွင်း မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော အဆီကို လျှော့နည်း စေပါတယ် ။
အစေ့ အဆန်များစားသုံးခြင်းဖြင့် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် များစွာ ရရှိစေပါတယ် ။ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းအပြင်ကို ထိခိုက်စေပါတယ် ။
ဓာတ်တိုး ပစ္စည်းတွေကို ဆန့်ကျင် ပေးတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒ င့်သာမရှိခဲ့ရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အိုမင်း ရင့်ရော်မှု မြန်ဆန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပိုးမွှားတွေ ကိုလည်း တိုက်ထုတ် နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ ။
ဒါကြောင့်မို့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့်များစွာ ပါဝင်တဲ့ အစေ့ အဆန်တွေကို နေ့စဉ်စားသုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ် ။
သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီကို လျော့နည်းစေရန်အစေ့အဆန်များကို စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချို့အစေ့အဆန်တွေက သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီ တွေကို သိသိသာသာ လျှော့နည်းစေပြီး နှလုံးနဲ့သွေးကြောရောဂါတွေ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Pecans အခွံမာသီးကို စားသုံး ပေးရင် သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီကို လျော့နည်းစေပြီး ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် pecans အခွံမာအသီးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူလို ရနိုင်နေပါပြီ ။
အစေ့အဆန်တွေဟာ ပရိုတင်းဓာတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် ။ သစ်ကြားသီးကို စားသုံးရင် ပရိုတင်း ဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ ပရိုတင်းဓာတ်ကြောင့် ဗိုက်ကိုပြည့်တင်းစေတဲ့ အပြင် ကြွက်သားတွေတည်ဆောက်ရာ မှာလည်း လိုအပ်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ချချင်သူတွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။
အစေ့အဆန်များမှာ အမျှင်ဓာတ် လုံလောက်စွာ ပါဝင်ပါတယ် ။ အစေ့အဆန်တွေ စားသုံးပါက အမျှင်ဓာတ်ကြောင့် အစာချေဖျက်ခြင်းကို အထောက်အကူ ပြုစေပါတယ် ။ အစာချေ စနစ်မှာအစားအစာတွေကို ချေဖျက် စုပ်ယူဖို့နဲ့ စွန့်ပစ်ဖို့အတွက် အမျှင်ဓာတ်ဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ် ။
အစေ့အဆန် စားသုံးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းကျိုးတွေ များစွာ ရရှိစေပါတယ် ။ အစေ့အဆန် တွေမှာ ဆီလီနီယမ် ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်း တွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီလိုနည်းတွေဟာကင်ဆာ မဖြစ်နိုင်အောင်ကာကွယ် ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့ကစလို့ အစေ့အဆန်စားသုံးခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ကြပါစို့……။
အစအေ့ဆနျတှေ စားခွငျးဟာ သငျ့ကို ဘယျလို ကောငျးကြိုးတှေ ရနိုငျ မလညျး ဆိုတာ သငျသိပွီးပွီလား ။ သငျနဲ့ အခွားသော လူ အမြားစုဟာ အဆာပွေ မုနျ့ပဲ သရစော စားတဲ့ အခါ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျ တဲ့ အခြိုစာ တှေ အဆီ အအိမျ့ တှကေိုသာ မကျမကျ မောမော စားလရှေိ့ကွပါတယျ ။
အမှနျမှာ မုနျ့ပဲ သရစော အဖွဈ အစေ့ အဆနျမြားကိုသာ စားကွမယျ ဆိုရငျ အစာလညျး ပွေ ကနျြးမာရေး အကြိုး ကြေးဇူး တှကေိုလညျး ရနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ အိုမီဂါ ၃ အဆီကို ရရှိဖို့…. သငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှာ အမှနျတကယျ လိုအပျနတေဲ့ အဆီ အိုမီဂါ ၃ ကို အစအေ့ဆနျ တှကေနေ ရရှိ နိုငျတယျဆိုတာကို အရငျဆုံး ပွောခငျြ ပါတယျ ။
အိုမီဂါ ၃ အဆီဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ရောငျရမျးမှုကို မဖွဈအောငျ ကာကှယျ ပါတယျ ။ နာတာရှညျရောငျရမျးမှု တှကွေောငျ့ အခွားသော ခန်ဓာကိုယျတှငျး ရောဂါ မြားကို ဖွဈပှား စတောမို့ အစအေ့ဆနျကို စားသုံးပွီး ရောငျရမျးမှု ကို လြှော့နညျးအောငျ ပွုလုပျ နိုငျပါတယျ ။
နစေ့ဉျ သရစောအဖွဈ စားသုံး ပေးပါက သှေးတှငျး မကောငျးတဲ့ ကိုလကျစထရော အဆီကို လြှော့နညျး စပေါတယျ ။
အစေ့ အဆနျမြားစားသုံးခွငျးဖွငျ့ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့ မြားစှာ ရရှိစပေါတယျ ။ ဓာတျတိုးပစ်စညျးတှဟော ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးအပွငျကို ထိခိုကျစပေါတယျ ။
ဓာတျတိုး ပစ်စညျးတှကေို ဆနျ့ကငျြ ပေးတဲ့ အငျတီအောကျဆီးဒ ငျ့သာမရှိခဲ့ရငျ လူ့ခန်ဓာကိုယျဟာ အိုမငျး ရငျ့ရျောမှု မွနျဆနျစပွေီး ခန်ဓာကိုယျတှငျး ဝငျရောကျလာတဲ့ ပိုးမှားတှေ ကိုလညျး တိုကျထုတျ နိုငျမှာ မဟုတျပါ ။
ဒါကွောငျ့မို့ အငျတီ အောကျဆီးဒငျ့မြားစှာ ပါဝငျတဲ့ အစေ့ အဆနျတှကေို နစေ့ဉျစားသုံးဖို့လိုအပျတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ဆိုထားပါတယျ ။
သှေးတှငျးမကောငျးတဲ့အဆီကို လြော့နညျးစရေနျအစအေ့ဆနျမြားကို စားဖို့လိုအပျပါတယျ။တခြို့အစအေ့ဆနျတှကေ သှေးတှငျးမကောငျးတဲ့အဆီ တှကေို သိသိသာသာ လြှော့နညျးစပွေီး နှလုံးနဲ့သှေးကွောရောဂါတှေ မဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။
Pecans အခှံမာသီးကို စားသုံး ပေးရငျ သှေးတှငျးမကောငျးတဲ့အဆီကို လြော့နညျးစပွေီး ဓာတျတိုးပစ်စညျးတှကေိုလညျး တိုကျထုတျပေးနိုငျပါတယျ။ အခုဆိုရငျ pecans အခှံမာအသီးကို မွနျမာနိုငျငံမှာဝယျယူလို ရနိုငျနပေါပွီ ။
အစအေ့ဆနျတှဟော ပရိုတငျးဓာတျကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ ။ သဈကွားသီးကို စားသုံးရငျ ပရိုတငျး ဓာတျပွညျ့ဝစှာ ရရှိနိုငျပါတယျ ။ ပရိုတငျးဓာတျကွောငျ့ ဗိုကျကိုပွညျ့တငျးစတေဲ့ အပွငျ ကွှကျသားတှတေညျဆောကျရာ မှာလညျး လိုအပျတာကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ခခြငျြသူတှနေဲ့ အသငျ့တျောဆုံးပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ ။
အစအေ့ဆနျမြားမှာ အမြှငျဓာတျ လုံလောကျစှာ ပါဝငျပါတယျ ။ အစအေ့ဆနျတှေ စားသုံးပါက အမြှငျဓာတျကွောငျ့ အစာခဖြေကျြခွငျးကို အထောကျအကူ ပွုစပေါတယျ ။ အစာခြေ စနဈမှာအစားအစာတှကေို ခဖြေကျြ စုပျယူဖို့နဲ့ စှနျ့ပဈဖို့အတှကျ အမြှငျဓာတျဟာ မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ ။
အစအေ့ဆနျ စားသုံးခွငျးဟာ ကနျြးမာရေး အတှကျကောငျးကြိုးတှေ မြားစှာ ရရှိစပေါတယျ ။ အစအေ့ဆနျ တှမှော ဆီလီနီယမျ ဓာတျကွှယျဝတာကွောငျ့ ဆဲလျတှကေို ပကျြစီးစတေဲ့ ဓာတျတိုးပစ်စညျး တှကေို ဆနျ့ကငျြတိုကျထုတျပေးနိုငျပါတယျ ။ ဒီလိုနညျးတှဟောကငျဆာ မဖွဈနိုငျအောငျကာကှယျ ပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ ။
ဒီနကေ့စလို့ အစအေ့ဆနျစားသုံးခွငျးဖွငျ့ မိမိကိုယျကိုယျဂရုစိုကျကွပါစို့……။
This Year : 69358
Total Visit : 143829
Total Hits : 2098031